Yekutanga GymKit-inoenderana gym iri muAustralia | Ndinobva mac
GymKit chishandiso chinonakidza kune avo vashandisi vane Apple Watch uye senge, pamusoro pekuita mitambo kunze kwenyika, uchizviita mumajimu. Neichi chishandiso chakabatanidzwa muCupertino vakomana wachi, vatambi vanokwanisa kutumira uye kugamuchira ruzivo rwechiitiko kubatanidza michina newachi kuburikidza neNFC.
Mukutaura, iri basa nyowani iro rakawedzerwa mune yazvino vhezheni yewatchOS inowanikwa, inotibvumidza isu kuziva iyo data yemuchina pane yedu wachi uye zvinopesana. Ona macalorie akatsva, iyo nguva yatakaita yekurovedza muviri kana kutobvunza rese data rechiitiko chinoitwa nemichina yakasiyana mujimu zvave kutokwanisika mune yekurovedza muviri muAustralia.
Zvinongodiwa kuti michina iyo yekurovedza iwirirane newachi uye mune ino Apple pachayo yakatove nhevedzano yevagadziri vanopa kuenderana
Kuunza wachi padyo neNFC chikamu chemuchina izvi zvinowiriraniswa otomatiki uye nekukurumidza. Kamwe pairi inotanga kuyera huwandu hwenhanho, kureba, kurova kwemoyo, macalorie uye nezvimwe. Kana tangosiya muchina, idzi data dzichadzimwa kubva ipapo ipapo, asi zvinyorwa zvichachengetwa mune smart wachi.
Munzvimbo iyi yekurovedza muviri muAustralia mune ekutanga michina kubva kugadziri TechnoGym (Hupenyu Kusimba, Matrix, StairMaster, uye Schwinn vanozowiriranawo) neiyi tekinoroji kuve yekutanga kutanga kushandisa GimKit. Zvishoma nezvishoma zvishoma nezvishoma zvichawedzerwa kune mamwe magym munyika uye zvinotarisirwa kuti mamwe masosi anotanga kugadzirisa michina kuti ikwanise kunakidzwa nesarudzo iyi. Zvine musoro, maGyms makuru ane vhoriyamu yakawanda yevashandisi ndiye achave wekutanga kushandisa michina inoenderana, uye haina kudzikira zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Yekutanga GymKit-inoenderana gym iri muAustralia
Zvinoratidzika kwandiri kunge zano rakanaka kwazvo uye rakanyatsoitwa.
Wall wall ye iMac inosvika 27 inches
Nhasi chiyeuchidzo cheApple Yakawedzerwa Khibhodi II, imwe yemakona akanakisa eMac